Armrests ewiricheya zvese OEM uye Kudzoreredzwa | KarmanHealthcare
musha / Wiricheya Kudzosera Zvikamu / Armrests
Achiratidza zvose 14 zvawanikwa
Wiricheya armrests zvese OEM uye kutsiva
Iko kazhinji kudhonza mhando dze armrests iripo. Mazhinji acho ndeepasi rese uye anogona kushandiswa kuwedzeredza akawanda mabhureki uye mamodheru. Dzimwe nguva wiricheya inouya navo kuitira kuti iwe ugone kuishandisa kunze kwebhokisi. Paunenge uchitenga wiricheya, kazhinji kazhinji sarudzo yakanaka kutenga neiyo inouya nayo kunze kwebhokisi.
Zvigaro zvewiricheya zvakaita semabhureki mumotokari. Ndidzo zvinhu zvekutanga zvinotora kusakara. Kunyangwe kushungurudzwa. Asi yakakosha kwazvo. Kana uchitsikaira mukati nekubuda pawiricheya, kazhinji kacho mubato watinoshandisa kubata. Iwe unogona zvakare kuzorora maoko ako pavari uye kusungirira zvinhu. Ichi chikonzero nei ruoko-mapads achigadzirwa. Ita shuwa iwe unotisheedza isu kuti tiwane chaiyo armrest yechigaro chako kana kutsiva.
Kuwana Armrest chaiyo yewiricheya yako
Chikonzero nei kuwana chaiyo chaiyo yewiricheya yako kwakakosha. Chigaro chega chega chakagadzirwa zvakasiyana. Kureba, izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvese zvakasiyana. Vamwe vane yekuwedzera nzvimbo yekukwirisa iyo yakazara urefu. Dzimwe dzakareba tafura. Ivo vese vakasiyana. Kungofungidzira kuti iwe unogona kukodzera imwe mukati, hazvireve kuti "yakagadzirirwa" chigaro chako uye ichiri kugona kuramba isina kuchengetedzeka. Mazhinji anogadzira anogona kuchinja saizi yehubhu kuitira kuti iyo "isiriyo" isakwanise. Izvi zvakafanana nechengetedzo mashandiro akavakirwa mukati. Zvakafanana nesarudzo plug. Kune akasiyana maumbirwo uye saizi uye zvakakosha kuti usazvisanganisa.
Asi usazvidya moyo, tauya kuzobatsira. Ingo fona, mameseji, kana email isu uye tipe iwe yako yemhando nhamba uye serial nhamba. Tichakwanisa kukupa chaiyo armrest yauri kutsvaga. Sezvauri kuona, kuwana ruoko chairwo rwewiricheya kwakanyanya kukosha.